DAAWO SAWIRO:- Ra’iisul Wasaare Xassan Cali Kheyre oo la kulmay Boqorka dalka Sucuudiga Carabiya – SHABAKADA HIIRAAN XOG
[ 18/02/2019 ] Somali president jets off to Burundi for an official visit	English News
[ 18/02/2019 ] AKHRISO:- Xisbiga Wadajir oo ka hadlay xiisada Soomaaliya iyo Kenya	Arimaha Bulshada
HomeArimaha BulshadaDAAWO SAWIRO:- Ra’iisul Wasaare Xassan Cali Kheyre oo la kulmay Boqorka dalka Sucuudiga Carabiya
DAAWO SAWIRO:- Ra’iisul Wasaare Xassan Cali Kheyre oo la kulmay Boqorka dalka Sucuudiga Carabiya
10/10/2018 B M Arimaha Bulshada, Wararka, Wararka Dibada, Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre, ayaa maanta qasriga boqortooyada Sucuudiga kula kulmay boqorka dalka Sucuudiga, Boqor Salman bin Abdulaziz Aala Sacuud.
“Waxa aan maanta Qasriga boqortooyada kulan kula qaatay boqorka dalka aan walaalaha nahay ee Sucuudiga Boqor Salmaan Bin Cabdul Casiis. Waxa aan ka wada hadalnay xoojinta xiriirka taariikhiga ah ee labada dal iyo iskaashiga dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda” ayuu ku yiri Ra’iisul Wasaaare Kheyre qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa kulamo la leh madaxda Bangiga horumarinta Islaamka oo ay ka wada hadlayaan horumarka dhaqaalaha Soomaaliya, maal-gelinta iyo dib-u-habaynta ballaaran ee lagu sameeyay hannaanka maamulka maaliyadda dalka.
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa shalay gaaray magaaladda Riyaadh ee dalka Boqortooyada Sucuudiga, kadib casuumaad rasmi ah oo uu ra’iisulwsaaruhu ka helay dalka aan walaalaha nahay.
Madaxa Hay’adda ka hortagga masiibooyinka ee Maamulka Puntland oo shacabka uga digay dufaanta Luban
Sanatar Cabdi Qeybdiid oo baaq u diray maamulka Puntland